साझापोष्ट टिप्पणी/काठमाडौं, १८ चैत । ५ दिन बढी भइसक्यो, दार्चुलापारि महाकाली किनारमा मान्छे अलपत्र छन् । सामाजिक सञ्जालमा फोटो र भिडियो छ्यापछ्याप्ती छ । फोनबाट बुझ्दा त्यहाँको स्थिति निक्कै भयावह छ । नेपाल पस्न चाहने ठूलो हुलले नदी किनारमै रात बिताई रहेका छन् । केही मान्छे महाकाली नदीमा हाम्फालेर नेपाल पस्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनीहरुलाई पनि पुलिसले छोडेको छैन ।
नदीमा जोखिम मोलेर हेलिएकाहरुले आफ्नो कुम्लो कुटरो पारी नै छोडेर ज्यान मात्र जोगाउन चाहेको प्रष्टै बुझिन्छ । तर ती नाङ्गै नदीमा हेलिएका मानिसमाथि पुलिस प्रशासनको बर्बबरताको अर्थ बुझिनसक्नु छ । यो के तमासा गरेको हो ? किन गरेको हो ? कहिलेसम्म यस्तो गर्ने हो ? सरकारको सबै अंग र निकाय मौन छन् । कोही बोलिरहेका छैनन् ।
सरकारले भन्ला- लकडाउन भइसकेपछि जहाँको त्यही किन नबसेको ? सीमा बन्द भइसकेपछि किन नाकामा आएको ? यस्तो जवाफ बिल्कुल ओठे जवाफ हो । धरातलीय यथार्थप्रति कुनै ज्ञान र संवेदना नभएको टर्रो जवाफ हो । नेपाल भारत सीमामा त्यस्तो परिस्थिति किन आयो ? त्यसको विश्लेषण हुन जरुरी छ ।
ती मान्छे जो भारतीय सीमामा आइपुगेका छन् र नेपाल पस्न चाहन्छन्, ती सरकारको आदेश उल्लघंन गर्न त्यहाँ आएका हैनन् । ती मान्छे नेपाल ग्रिन जोनमा छ भनेर सुरक्षित हुन आएका भारतीय वा विदेशी पनि हैनन् । ती केही मन्त्रीज्युहरुले भने जस्तो ‘गिद्ध’ र ‘कुकुर’ हैनन्, जो सत्ताको सिनो लुछ्न आएका हुन् । उनीहरुको घर छ नेपालमा । आफन्त छन् । परिवार छन् । मरे संगै मरौला, बाँचे संगै बाँचौला भनेर घर आएका हुन् । जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि घर फर्किने अधिकार मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो ।
घर भन्दा आफ्नो र प्यारो मान्छेको संसारमा अरु केही हुँदैन । घरभन्दा ठूलो आश्रय र सुविधा मान्छेको अरु केही हुँदैन । घर चाहे त्यो दश ठाउँ चुहिने पराले झुपडि होस वा नमिलेको बाङखुट्टे ढुंगे गारो, घर घर नै हो । घर पुग्दा मान्छेले जुन स्वामित्व, अपनत्व र सहासको अनुभूति गर्दछ, त्यो अन्यत्र कतै गर्न सक्दैन । भ्रम नपरोस कि देश भनेर आएका हुन । ती देश भनेर पनि आएका हैनन्, घर भनेर आएका हुन । यदि यो देशमा उनीहरुको घर हुँदैनथ्यो भने उनीहरु यो देश आउँने थिएनन् । त्यही देशमा जान्थे, जहाँ आफ्नो घर छ ।
जहाँ मान्छेको घर छ, परिवार छ, नातागोता छन, वैधानिक कानुनी अधिकार छ, त्यो ठाउँ स्वत मान्छेको देश हुन्छ । घर भएर देश हुने हो, देश भएर घर हुने हैन । तसर्थ यो भुल्नु हुन्न कि जस्तोसुकै सरकार, जस्तोसुकै राजनीतिक प्रणाली, जुनसुकै नाताशाहले मान्छेको घरसंगको सम्बन्ध टुटाउँन सक्दैन । टुटाउँन पाउँदैन । यदि कुनै शासक मान्छेको घरसंगको सम्बन्ध टुटाउँन उद्यत्त छ भने त्यो भन्दा अमानवीय, निकृष्ट, निर्घृणी र तानाशाही शासक अरु कोही हैन । अरु कोही हुन सक्दैन ।
सरकारले भन्ला यो असामान्य अवस्थाको कुरा हो । बिल्कुल हैन । यस्तो परिस्थिति आउँनुमा ती मान्छे हैन, सरकारहरु दोषी छन । सीमा नाका व्यवस्थापनमा नेपाल र भारत दुबै देशका सरकारले गल्ती गरेका छन । उनीहरु बीच समन्वय हुनु पर्दथ्यो । कहिलेदेखि बन्द गर्ने सामञ्जस्य हुनु पर्दथ्यो । यदि लकडाउँन भारतमा पनि भएको हो भने ती मान्छेहरुलाई सीमासम्म आउँन उताको सरकारले किन दियो ? नेपाल सरकारले भारत सरकारको रणनीति के हो ? किन बुझेन ? किन समन्वय गरेन ?
यथार्थमा ती मान्छेहरु भारतमा लकडाउन भएपछि नेपाल हिडेका मान्छे पनि हैनन् । ती भारतमा विभिन्न भागबाट भारतमा लकडाउन हुनु अगाडि नै नेपाल हिडेको मान्छे हुन । भारत धेरै ठूलो देश हो । त्यसका विभिन्न भागबाट एकै दिनमा नेपालको सीमा आइपुगिँदैन । महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, पञ्जाबआदि भारतीय प्रदेशबाट उनीहरु हिडेको दिन नेपालको सीमा आइपुग्दैन ।
जुन दिन उनीहरु हिँडे, भारतमा लकडाउन थिएन । भोलि वा पर्सीपल्ट लकडाउन भयो । ती बाटोमा अलपत्र परे । बाटोमै २१ दिन बस्न सम्भव थिएन । फर्किन भन्दा आफ्नै घर तिर जान उचित ठानेर ती नेपाल आए । केही मान्छेहरु नजिकबाट पनि आएका होलान् । अर्काको देशमा काम दाम विना लामो बस्दा पर्ने अप्ठ्यारो सम्झेर आफ्नै घर आउँन चाहेका होलान ।
नेपाल भारतको सम्बन्ध अरु देशको जस्तो हैन । नेपालको सीमा भारत र चीनसँग मात्र जोडिन्छ । अरु सबै देशसँगको सम्बन्ध हवाई सम्बन्ध हो । चीनसँगको सम्बन्ध स्थालमार्गबाट भए पनि त्यहाँ हिमाल छ । पहाड छन् । धेरै सहज नाका छैनन् । मान्छे चीनतिर त्यति जाँदैनन् पनि । किनकी जानु पर्ने काम पनि खासै पर्दैन । चीनले नेपालीलाई सीमा जोडिएर पनि सहज आवत जावतको सुविधा दिएको छैन । अरु देशजस्तै भिसा लिएर जानु पर्दछ । तसर्थ चीनसंगको नाका व्यवस्थापन नेपालका लागि खासै जटिल हैन । हवाई सम्बन्ध भएका देशहरुको जस्तै हो ।
तर भारतसंगको सम्बन्ध त्यस्तो हैन । यो खुल्ला सम्बन्ध हो । लाखौं नेपाली भारत जान्छन् । कतिले उत्तिको नागरिकता लिन्छन् । दोहोरो नाकगरिता चलाउने पनि होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो । तर नेपालीहरुका लागि संसारमा त्यही एउटा मात्र देश बेरोकटोक छ– भारत । बेरोजगारहरु जाने ठाउँ त्यही हो–भारत ।
मनिषा कोइराला र उदित नारायण झाझैं ठूल्ठूला सपना बोकेर जान पाइने देश पनि त्यही एउटा हो– भारत । विना पार्सपोर्ट र भिषा नागरिकता कार्ड देखाएर वा नदेखाएर पनि तरक्कीको आधार खोज्दै हिड्ने पाइने त्यही देश हो– भारत ।
तसर्थ, यो समस्या हल गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच गहिरो सहकार्य गर्नु पर्दथ्यो । कस्को कमजोरीले भएन, त्यो सरकारहरुले जान्ने हो, ती अलपत्र नागरिकले जान्ने हैन । हुनतः भारतबाट मात्र हैन, संसारको जुनसुकै देशबाट आउन चाहने नेपालीलाई नेपाल ल्याउनु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो । यदि क्षमता हुने हो भने चार्टर विमान पठाएर अरु खाडी लगायतका अरु देशबाट पनि ल्याउनु पर्छ । बरु यही क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो । हिजो चीनको वुहानबाट नेपाली फर्काएकै हो । भक्तपुरमा क्वारेन्टाइनमा राखेकै हो । यो स्थिति लामो गयो भने अरु देशबाट पनि त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर भारतसँगको हकमा कुनै ‘स्टे स्ट्राटेजी’ ले हुँदैन । के गर्ने हो, तुरुन्त गर्नु पर्दछ । भारतसंगको नेपाल सम्बन्ध प्राकृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक वा कानुनी हरेक हिसाबले फरक हो । भारतमा कति नेपाली बस्दछ सायदै कसैसंग तथ्यांक छ । तर ती सबै यो संकटमा नेपाल आएका हैनन, ती मात्र आएका हुन, जस्को नेपालमा आश्रय बाँकी छ ।
सरकारले भन्ला त्यसो भए के गर्ने त ? सूचना विश्लेषण र निर्णय क्षमता नभएको हो भने विज्ञहरुबाट सल्लाह र सुझाव लिनु पर्छ । गर्न सकिने सजिला काम छन् । भारतबाट आएका सबैलाई सीमा क्षेत्रमै क्वारेन्टाइन गर्न सम्भव छैन । नेपाल राज्यसंग त्यत्रो क्षमता छैन । त्यो क्षमता रातारात बन्दैन । गर्न सकिने सजिलो तरिका उनीहरुलाई सीमामा अभिलेख गर्ने हो । त्यो अभिलेख सम्बन्धी पालिकामा पठाईदने हो । त्यहीबाट उनीहरुको ‘फ्लो अप’ गर्ने हो । कस्को घर कस्तो छ ? स्थानीय अस्पताल र क्वारेन्टाइनको क्षमता कस्तो छ ? त्यसका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने हो ।
अन्य राष्ट्रहरुले विमान चार्टर गरेर आफ्ना नागरिकलाई विदेशबाट उद्धार गरिरहेका छन् । हामीले विमान चार्टर गर्न सक्दैनौं । तर बस रिजर्भ गर्न सक्छन् । हरेक गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइन गृहहरु निर्माण गरेका छन् । त्यहाँ व्यवस्थित गर्न सक्छ । आफ्नै देशका नागरिकले सीमा उभिएर मलाई मेरो देश छिर्न देऊ भनेर नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता हेर्न र सहन सकिने विषय होइन ।
यति सजिलो कुरा बुझ्ने नसक्नेहरु, भारतसँग समन्वय गर्न नसक्नेहरु त्यही गिद्ध र कुकरको कविता लेखी बसून । तर त्यो कविताको मूल्यमा हज्जारौं नागरिक महाकालीको बगरमा भोकभोकै मर्दिनु पर्छ भन्ने छैन । यस्तो अपराध कहिल्यै र कसैका लागि क्षम्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
फिचर पोस्ट, विज्ञान / प्रविधि, साझापोस्ट सिफारिस
फिचर पोस्ट, वागमती प्रदेश, साझापोस्ट सिफारिस
खोकनाबासीको गुहार सुन सरकार !
सिंगापुरमा सत्तारुढले बहुमत पाए पनि पहिलोपटक प्रतिपक्षी दलको उदय
फिचर पोस्ट, समाचार, साझापोस्ट सिफारिस
ओली सरकारको कोरोना रणनीतिः कति सफल ? कति असफल ?
सरिता गिरी कारबाही प्रकरणः ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भर्सेस ‘ह्वीप उल्लंघन’ को बहस
तनाव भारत र चीनको, निर्णायक भूमिका रुसको !
निकटस्थसँग ओलीको ब्रिफिङ– मैले छाडे शक्ति प्रचण्डमा सर्छ, पूर्वएमाले आफ्नै घरमा शरणार्थी हुन्छन्
‘चिनियाँ राजदूतको अवाञ्छित सक्रियता अस्वीकार्य छ’
भूमिगत नामले बालुवाटारमा हाँसो, प्रधानमन्त्री नै झुक्किन्छन्
‘कोरोना महामारीको अन्त्यसम्म भारतले अमेरिकालाई उछिन्न सक्छ’
चीनलाई ‘विस्तारवादी’ भन्ने मोदीले ऐना किन हेर्दैनन् ?
रित्तिँदै ओलीका अस्त्रहरुः न वामदेव धर्मराए, न दाहाल-नेपाललाई रिङ्गटा लाग्यो
नेकपा अन्तरसंघर्षको अन्त्य कसरी होला ?
फिचर पोस्ट, मुख्य समाचार, साझापोस्ट सिफारिस
के कृषिमन्त्रीले भनेजस्तै संगीतले सलह किरा कक्रक्कै हुन्छ ?
स्थायी समिति छल्दै एमसिसी पास गरिछाड्ने ओलीको तयारी, नेकपामा अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा
भारतमा कोरोना भाइस, हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या २३ हजार नाघ्यो
काठमाडौँ, २९ असार । भारतमा कोरोना भाइसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २३ हजार नाघेको छ । पछिल्लो वल्र्डवमिटरको रिपोर्ट अनुसार...